Jawaab degdeg ah: Muxuu ka kooban yahay Axdiga Hore ee Baybalka?
Category: Fiqiga 0
Maxay yihiin kutubta Axdiga Hore ee Baybalka? Waxay ka kooban tahay shanta buug ee ugu horreeya ee Axdiga Hore: Bilowgii: kitaabka asalka. Baxniintii: Buugga…
Waa maxay macnaha Baybalku markuu leeyahay?
Waa maxay macnaha erayga Ilaah ee Kitaabka Quduuska ah? Kitaabka Quduuska ah buug ahaan waa "Ereyga Ilaah", sababtoo ah noloshu waxay hore u ahayd "Ereygii Ilaah". Anaga iyaga…
Jawaabta ugu Fiican: Muxuu Baybalku ka yiri beenta?
Waa maxay beentii ilaahay? Beentu waxay ka kooban tahay, sidaas darteed, in aan la rabin in la aqbalo ama la oggolaado in la isu iftiimiyo runta iyo jacaylka Ilaah. Qadiimiga…
Jawaabta ugu Fiican: Maxay ka dhigan tahay in wax lagu qiyaano sida uu qabo Baybalka?
Waa maxay macnaha khiyaanada ee Kitaabka Quduuska ah? Qeexitaannada Beenta iyo Khiyaanada Sida ku jirta 1 Yooxanaa 2:21 Ilaah wuxuu inoo sheegay inaanay beeni runta ka socon karin. Sida laga soo xigtay…
Waa maxay dadaalka Kitaabka Quduuska ah?
Waa maxay qofka dadaala? Taxaddar , sax ah oo firfircoon . 2. adj. Wax yar , degdeg , degdeg ah ficilka . Maxay ka dhigan tahay in si dhab ah loo raadiyo?
Maxaa lagu sheegay Baybalka?
Muxuu Baybalku ka hadlayaa? Baybalku sidoo kale waa buug lagu akhriyi karo oo keliya nolosha bulshada rumaysadka leh,…
Waa maxay Suuriya Kitaabka Quduuska ah?
Waa maxay macnaha erayga Suuriya ee Kitaabka Quduuska ah? Erayga Suuriya waxa uu tilmaamayaa qofka Suuriya deggan ama afka Suuriya. Tani waxay ka timid Giriiggii Συρία (Suuriya), oo ka yimid Ashuur…
Xaggee Kitaabka Quduuska ah lagaga hadlaa?
Waa maxay qaadku? 1. sf Natiijada ugu horreysa ama wax soo saarka shay. 2. Wararka ugu horreeya ee uu weriyuhu ka helo xaqiiqo ama dhacdo waxay leedahay…
Jawaabta ugu Fiican: Waa tuma Maryan Kitaabka Quduuska ah?
Waa maxay dembiga Maryan? Rabbigu wuxuu Maryan ku ciqaabay baras. Maxaa ku dhacay Maryan oo Muuse walaashii ahayd? Hadda laga bilaabo Maria waa la waayay…
Su'aashaada: Waa maxay macnaha Ainhoa ​​Baybalka dhexdiisa?
Waa maxay magaca Ainhoa ​​​​macnaha Baybalka dhexdiisa? Macnaha Ainhoa ​​​​waa "ka la doortay", macnaha Ainhoa ​​​​wuxuu ka yimid bikrad (Bikradda Aránzazu ...
Baybalku muxuu ka yidhi kuwa wax sasabaya?
Immisa jeer ayuu kelmadda salaad kaga dhex muuqdaa Baybalka?
Waa maxay dareenka Christmas?
Intee bay ahayd tan iyo ballankii Ruuxa Quduuska ah?
Waa maxay sababta diinta dhabta ah ay qaali u yihiin?
Su'aashaada: Yaa ina siiyey Hooyo Maryan oo bikrad ah?
Su'aasha inta badan la isweydiiyo: Maxay ahaayeen mucjisooyinkii Ciise dhulka?
2022 XNUMX Synod